राजनीति Archives - Page 59 of 127 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
प्रधानन्यायाधिशको गतिविधिप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरुप सर्वोच्चका ८ न्यायाधिश तोकिएको इजलास बसेनन
२९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १४:०४ March 13, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौ, २९ फागुन । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मंगलबार चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई इजलास नताेकेपछि इजलास तोकिएका ८ जना न्यायाधीशहरु मंगलबार पाैने एक बजेसम्म इजलासमा बसेका छैनन्। सपना मल्ल प्रधान, हरिकृष्ण कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाश रावत र दीपक जोशी अहिलेसम्म तोकिएको इजलासमा गएका छैनन्। मंगलबारका लागि प्रधान र कार्कीको एउटा इजलास […]
काठमाडौं, २९ फागुन । तस्करीको साढे ३३ केजी सुन गायब भएपछि हत्या गरिएको सनम शाक्यको घटना सेलाउन नपाउँदै झापाका अर्का सुन व्यवसायीको अपहरणपछि हत्या भएको छ । एक साताअघिदेखि बेपत्ता बनेका सुन व्यवसायी साजन मुखियाको शव सोमबार इलामको रोङ गाउँपालिका–३, कोल्बुङमा भेटिएको हो । उनी सुन व्यवसायी संघ, झापाका सदस्य समेत हुन् । उनको शव मेची […]
काठमाडौँ, २८ फागुन । बाेक्सीकाे अाराेप लगाउँदै कक्षा ११ मा पढ्ने युवतीमाथि लगातार ६ घन्टा कुटिएकाे घटनाका रमिते भएकाे र सञ्चारमाध्यममा निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अन्तरवार्ता दिएकाे भन्दै अालाेचना खाएका कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि गोली प्रहार भएकाे छ । उनलाई कैलालीकै सुख्खडमा रहेकाे अाफ्नै घरमा बसिरहेका बेला गाेली हानिएकाे बताइएकाे छ । सोमबार साँझ […]
२८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०९:२३ March 12, 2018 Nonstop Khabar
रुपन्देही । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अाेली नेतृत्वकाे सरकारले अपनाएकाे दमनपूर्ण रवैयाका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेकाे छ । नेकपाकाे लुम्बिनी ब्यूराे अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा विशाल र्यालीसहित विराेध प्रदर्शन गर्नुका साथै जनसभाकाे पनि अायाेजना गरिएका छन् । यसअघि अाेली सरकारले नेकपाका महासचिव विप्लवलार्इ पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै कपिलवस्तुमा रहेकाे उनकाे दार्इकाे […]
विचारलार्इ बन्दुकले दबाउने केपी ओलीको सोच दिवास्वप्न मात्र : नेकपा
२८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०८:५७ March 12, 2018 Nonstop Khabar
कपिलवस्तु । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कपिलवस्तुमा विशाल जनसभा सम्पन्न गरेकाे छ । पार्टीका महासचिव विप्लवका नाममा सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन सहित जनसभा गरिएकाे नेकपा लुम्बिनी ब्यूराेले जनाएकाे छ । कपिलवस्तुकाे जितपुरमा अायाेजना गरिएकाे जनसभालार्इ नेकपाका पाेलिटब्यूराे सदस्य विरजंगले सम्वाेधन गरेका थिए । नेकपाकाे लुम्बिनी व्यूरो इन्चार्ज समेत रहेका नेता वीरजंगले सरकारले […]
२८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०१:३७ March 12, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २७ फागुन । अखिल (क्रान्तिकारी) काे २१ अाैं राष्ट्रिय सम्मेलन दाङमा अाइतबारबाट सुरु भएकाे छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे विद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीले यस सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुका साथै शैक्षिक परिवर्तनका लागि सशक्त अान्दाेलन गर्ने खाका तयार गर्ने जनाएकाे छ । दाङको घोराहीमा अायाेजित सम्मेलनका उद्घाटन शत्रमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सन्ताेष बुढा मगरले गरेका […]
अाेलीले यसरी पाए दुर्इ तिहार्इ बहुमत, के गर्छन अाेली अब?
२७ फाल्गुन २०७४, आईतवार २३:४५ March 11, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २७ फागुन । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा अाेलीले संघीय प्रतिनिधिसभाबाट दुर्इ तिहार्इ बहुमत प्राप्त गरेका छन् । अाइतबार प्रतिनिधि सभामा भएकाे मतदानबाट अाेलीले याे मत पाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाकाे अाइतबार बसेकाे बैठकमा अाेली सरकारका लागि विश्वासको मतका लागि भएको मत विभाजनमा ओलीका पक्षमा २ सय ८ र विपक्षमा ६० मत […]
कम्युनिस्टका घोषणापत्र सबै कन्ठस्थ पारेको भन्दै गगन थापाले संसदमा दिए यस्तो धम्की
२७ फाल्गुन २०७४, आईतवार २३:१७ March 11, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, २७ फागुन । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले नेपालको संसदीय व्यवस्था मानिरहेका कुनै पनि कम्युनिष्ट नामका पार्टी कम्युनिष्ट नभएको बताएका छन् । उनले आइतबार संसद बैठकमा बोल्दै यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चाेटीले रुपमा प्रस्तुत भएका थापाले नेपालमा नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ बाहेक अरु पार्टीहरु सुद्ध कम्युनिष्ट नभएको […]
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनकाे ललितपुरमा विनाेद श्रेष्ठ भए अध्यक्ष
२७ फाल्गुन २०७४, आईतवार १४:०१ March 11, 2018 Nonstop Khabar
ललितपुर, २७ फागुन । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले ललितपुर जिल्लामा नयाँ समिति गठन गरेकाे छ । अाज ललितपुरकाे पुल्चाेकमा भएकाे दाेस्राे जिल्ला सम्मेलनबाट विनाेद श्रेष्ठकाे नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएकाे हाे । नयाँ कार्यसमितिमा रामप्रसाद घिमिरे, सचिवमा मिना भट्टराई, सहसचिव हुमकला मिश्र र कोषाध्यक्ष अनिता परियार रहेका छन् । अागामी बैशाख १५ र १६ गते अायाेजना […]
२७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०७:२६ March 11, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, २७ फागुन । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालको काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले करण बडालको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गरेको छ । सम्मेलनकाे बन्दशत्रबाट उपाध्यक्षमा शैलेश डंगोल, सचिवमा सुरज प्याकुरेल, सहसचिवमा केशव भुल र कोषाध्यक्षमा शम्भु दंगाल निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष बडाल लामो समयदेखि पूर्णकालिन रुपमा मिशन पत्रकारितामा अावद्ध छन् […]
Previous 1 … 58 59 60 … 127 Next